आइटी कम्पनीहरु अप्ठ्यारोमा ! के गरे ट्रम्पले ? | Ekhabar Nepal
विश्व पौष २४ २०७४ ekhabarnepal
अमेरिकामा नयाँ भिसा नीतिका कारण त्यहाँ रहेका ठूला आईटी बहुराष्ट्रीय कम्पनीहरु समस्यामा परेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकीमा रहेका कम्पनीहरुमा आफ्ना नागरिकलाई पहिलो प्रथमिकता दिने बताए पछि आइटी कम्पनीहरुलाई समस्या भएको हो । अमेरिकाको ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु गुगल, माइक्रोसफ्ट, आइबीएम जस्ता कम्पनीमा धेरै मात्रामा विदेशी कामदार कार्यरत छन् ।
गुगल,माइक्रोसफ्ट र आइबीए जस्ता कम्पनीमा अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराउने एच १ बी भिसा लिएर काम गर्ने हजारौ विदेशीहरु कार्यरत रहेका छन् ।
अमेरिकाले उच्च शिक्षा र अनुसन्धानकर्तालाई दिने एच १ बी भिसामा कडाइ गर्न थालेपछि कम्पनी र उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुका कारण सञ्चालन खर्च महगो हुने भएको हो । अमेरिकाले उपलब्ध गराउने एच १ बी भिसा पाएका विदेशीले अस्थायी रुपमा काम समेत गर्न पाउँदथे । यस भिसा पाउने विदेशीले आफ्नो परिवार लैजान चाहेमा एच ४ भिसा दिने गरिेको थियो ।
सन् २०१५तत्कालिन राष्टपति मा बराक ओबामाको कार्यकालमा एच १ बी भिसाको नियम परिवर्तन गर्दै एच ४ भिसा पाएकाले पनि अमेरिकामा का गर्ने अनुमति दिने बनाएका थिए । विभिन्न अन्तर्राष्टिय समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरे अनुसार टम्प प्रशासनले यो नियम परिवर्तन गर्दै अब एच ४ भिसा लिएर अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका विदेशीले काम गर्न पाउने छैनन् । यसले एच १ बी भिसा लिएका विदेशीलाई पनि परिवारहरुसँगको भेटघाट गर्न बन्द हुने छ ।
सूचना प्रविधिमा काम गर्ने विश्वका ठूला कम्पनीहरु अमेरिकामा रहेका छन् । यी कम्पनीहरुमा काम गर्ने कयौ विदेशी कामदाहरु एच १ बी भिसाका आधारमा काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाकी प्रशासनले केहि कम्पनीहरुले हालको कानुनीको उलंघन गर्दै कम्पनीहरुले फाइदा लिइरहेको आरोप लगाएको छ ।
अप्रिल २०१७ मा व्हाइट हाउसले टीसीएस,इन्फोसिस र कग्निजेट जस्ता आइटी कम्पनीले जति पनि एच १ बी भिसाको फाइदा उठाउँदै कामदार राखेका छन् यसले के स्पष्ट हुन्छ भने यी कम्पनीहरुले देशको कानुनको उलंघन गरेका छन् अमेरिकी प्रशासनको आरोप छ ।
एच १ बी भिसा सम्बन्धी नीति सन १९९८ संशोधन गरिएको थियो । त्यस बेला अमेरिकी नागरिकलाई छोडेर एच १ बी भिसा लिएका विदेशीलाई कम्पनीहरुले जागिरमा राखेको अमेरिकी प्रशासनले आरोप लगाएको थियो । एच १ बी भिसाको अनुसार यस्ता भिसा भएका विदेशीहरुलाई न्युनतम वार्षिक रुपमा ६० हजार अमेरिकी डलर तलब दिन पर्ने नियम रहेको छ ।
अमेरिकी सरकारको नियम अनुसार यस्तो पदमा पहिलो प्रथमिकता अमेरिकी नागरिकलाई दिइन पर्ने भनि उल्लेख छ ।
यो नियम अमेरिकाबाट स्नाकोत्तर डिग्री नलिएका अमेरिकनका लागि भने लागू नहुने नियम रहेको छ । व्हाइट हाउसका अनुसार कम्पनीमा अधिक मात्रामा एच १बी भिसा वार्षिक ६० देखि ६५ हजार अमेरिकी डलर तलब दिएर कम्पनीहरुले विदेशी कामदार राखेका छन् ।
जाहा अमेरिकी नागरिकलाई जागिरमा राखेको खण्डमा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर वार्षिक रुपमा खर्च हुने थियो । अमेरिकी राजनीतिक प्रतिनिधिहरुले भनेका छन् ‘कम्पनीहरु कामदारलाई कम पैसा दिएर विदेशी कामदारले रोजगारी पाए त्यसैले अमेरिक नागरिकहरु वेरोजार भए ।’
अहिले अमेरिकीमा एच १ बी भिसा लिएर काम गर्नेमा सबैभन्दा धेरै एसियाका नागरिकहरु रहेको अमेरिकी सिटिजन्स एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसले आफ्नो तथ्यांकमा देखाएको छ । जसमा भारतीयहरु ३ लाख ९०२ जना रहेका छन् । त्यसपछि चिनियाँ नागकिर ३५ हजार ७२० जना र फिलिपीन्सका नागरिक ३ हजार ७०४ जना रहेका छन् ।
अमेरिकामा आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुले एच १ बी भिसाको कारणदेखाउदै जागिरबाट निष्कासनमा परिसकेका छन् । उनीहरुले‘सेभ जब्स युएसए’ नामक संगठन स्थापना गरेर आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । यस संगठनका सदस्यहरु भन्छन् ‘ एच १ बी भिसाका कारण जागिर गयो ।’
एच १ बी भिसा र एच ४ भिसा वालाहरुको वर्क परिमिटमा पनि अमेरिकी सरकारले निगरानी गर्न थालेको छ ।सन् २०१६ मा ‘सेभ जब्स युएसए’ अमेरिकको कोलम्बिया राज्यको कोर्ट अफ अपीलमा मुद्दा समेत दायर गरिएको थियो । जसमा एच ४ भिसा वालाको जागिरमा राख्ने डिर्पामेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको फैसलाको चुनौति दिइएको थियो ।
यो मुद्दामा जिल्ला न्यायालयले पछि खारेज गरिदियो । सन् २०१७ मा पनि यस्तै खाको अर्को मुद्दा फेरि अदालतमा दायर गरिएको थियो । यस मुद्दामा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन । यदि अमेरिकी सरकारले एच १ बी भिसाको नियमलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेमा यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने धेरै सम्भावना रहेको छ ।
गुगल,माइक्रोसफ्ट र आइबीएमा जस्ता कम्पनीहरु धेरै विदेशीहरु एच १ बी भिसा वालाहरु काम गरिरहेका छन् । त्यसमा अझ भारतीहरुको सख्या अधिक रहेको छ ।
गत आइतबार वासिंटन पोष्टमा फेसबुकका प्रमुख जुकरबर्गले एक लेख लेखेमा भनेका छन् ‘ अमेरिकाका कयौ क्षेत्रमा अगाडि छ र यसमा एक कारण विदेशी नागरिक पनि हुन जसको कार्यक्षमताको अमेरिककाले फाइदा पनि लिएको छ । यदि एच १ बी भिसा वालालाई उनीहरुको देशमा पठाउने हो भने यहाका कम्पनी असर पर्नका साथै अमेरिकालाई समेत असर पर्छ ।’
अमेरिकामा रहेका कानुन व्यवसायीहरुले भने तत्काल एच १ बी भिसा वालालाई हटाउने वा भिसा नियम परिवर्तन गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । यदि अमेरिकी प्रशासनले एच१ बी वा एच ४ भिसाका नियमहरु परिवर्तन गर्न चाहेमा पनि यससँग जोडिएका अन्य कयौ नियमहरु परिवर्तन गर्न पर्ने हुन्छ । (विदेशी सञ्चारमध्याम को सहयोगमा)